Ny fiakaran'ny voaloboka | Martech Zone
Ny fiakaran'ny voaloboka
Alahady 16 Febroary 2014 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Vine natomboka herintaona lasa izay ary nanana fahombiazana kely. Eritrereto i Vine ho toy ny kinova video ao amin'ny Twitter, izay hanoratanao horonantsary fohy ary ampakarinao. Tsy mahagaga raha nividy an'i Vine ny Twitter ary nampiditra ireo horonantsary avy amin'ny Twitter sy ireo rindranasa. Rehefa mampiasa ny fampiharana ianao dia tsy mirakitra an-tsoratra ny fakan-tsary raha tsy voakitika ny efijery, mamela anao hanao horonantsary mahafinaritra.
Ity misy santionany iray amin'ny fampiasan'ny mpivarotra voaloboka:
Miaraka amin'ilay sary, Tamba dia nanoratra lahatsoratra tamin'ny maninona ny fitomboan'ny Vine no tokony hahaliana ny mpivarotra. Ahitana stat mahaliana izy ireo - araky ny Unrulymedia, ny Vines misy marika dia avo efatra heny noho ny horonan-tsary misy marika mahazatra. Efa eo amin'ny Vine ve ny marikao?
Tags: -barotraLahatsary Marketingvarotra voalobokavoaloboka twitter
CoSchedule: Kalandrie fanontana sy fanontana ara-tsosialy ho an'ny WordPress
URL vaovao: Diovy ny URL-nao amin'ny fizarana
17 Feb 2014 tamin'ny 3:48 maraina
Lohahevitra fotsiny: Tsy voalamina tsara ny lahatsoratra. Tsy misy elanelana eo anelanelan'ny teny.